Kenya oo shaacisay xilliga la saxiixayo hesiiska qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya | Radio Hormuud
Kenya oo shaacisay xilliga la saxiixayo hesiiska qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya
Kenya ayaa qarka u saaran inay dib u furto suuqa jaadka ee Soomaaliya iyadoo la filayo in heshiiska la saxiixo horraanta bisha Luulyo.
Wasiirka beeraha Peter Munya ayaa dhamaadkii toddobaadkan shaaca ka qaaday in wadahadalada u dhexeeya labada dal ay galeen qeybtii ugu dambeeysay iyadoo heshiis la filayo laba toddobaad gudahood.
"5-ta bisha Luulyo ee soo socota, heshiiska waxaa lagu saxiixi doonaa halkan Nairobi," ayuu yiri Munya xilli lagu gudajiray ololaha doorashada Kenya ee lagu inay dhacdo bilowga bisha Ogosto.
Munya ayaa markii uu hadalkan sheegayay waxa uu ku sugnaa Ismaamulka Meru oo ay ku yaallaan beeraha qaadka.
Soomaaliya ayaa hakisay qaadkii laga dhoofini jiray Kenya labo sannadood ka hor oo ay taariikhda ku beegnayd 19-kii Maarso, ee 2020, iyadoo sabab looga dhigayo xayiraadaha Covid-19.
Hakinta ayaa si kastaba ha ahaatee, aan marna la qaadin kadib markii uu soo shaac baxay khilaaf diblumaasiyadeed oo u dhexeeya labada dal.
Mamnuuciddaasi ayaa horseedday in suuqa maalinlaha ah ee qaadka uu lumiyo in ka badan 50 tan oo qaad ah oo markaas lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka Kenya ah oo dhiganta ku dhowaad 200 oo kun doolar.
Hase yeeshee wasiir Munya ayaa u xaqiijisay beeralayda Jaadka Kenya in dhibaataadaasi ay haatan sii dhamaanayso.
"Kaliya beerta dalagiina jaadka, oo beerihiinna diyaarsada, suuq baa la helaye," ayuu ku yiri isaga oo aad uga farxinaya dadkii badnaa ee halkaasi isugu soo baxay.
Wasiirka wuxuu sheegay in dib u habaynta qaybta kale ee beeraha oo ay ku jirto caleenta shaaha sidoo kale socdaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda ka jawaabtay arrimaha la xiriira ganacsiga qaadka Kenya ee ay warbaahinta qaar tabisay in dhowaan dib loogu fasixi doono Soomaaliya.
Xogta ay BBC-da ka heshay ilaha dowladda ayaa sheegeysa in weli uu socdo wadaxaajoodka labada dowladood, go'aan rasmi ahna aan la gaarin.
Soomaaliya ayaa mas'uuliyiinta Kenya ka dalbatay in loo hirgeliyo dhowr arrin oo ay ka mid yihiin:
In muddo ahba Soomaaliya ayaa u hanqal taagaysay in ay xubin ka noqoto Ururka Bulshada Bariga Afrika, oo hadda ka kooban toddobo waddan oo kala ah: Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Koongo.
XIGASHADA SAWIRKA,NATION MEDIA GROUP
Ujeeddada ay Soomaaliya ka leedahay xubinnimada EAC waxaa ugu wayn in la xoojiyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee Soomaaliya iyo in dadka wata baasaboorka Soomaaliya ay dal-ku-gal-la'aan ku dhex safri karaan waddamada ku jira ururkan Bariga Afrika.
Kullaankan wuxuu ka mid yahay noocyada ay kalluumeysatada soo qabsadaan ee ugu badan - sawir hore
Dowladda Kenya ayaa toddobaadkii hore shaacisay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalay inuu qaado xayiraadihii saarnaa qaadka ka imaan jiray Kenya.